ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » စာနယ်ဇင်းမှတ်စု » လက်တင်အမေရိက၏အကြမ်းမဖက်သောအနာဂတ်ဆီသို့
07 / 10 / 2021 06 / 10 / 2021 အားဖြင့် Giovanni ဝှိုက်
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်သောကြာနေ့၌ Heredia မြို့ရှိငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Civic စင်တာ၏အဆောက်အအုံများကို Heredia ၏မြို့တော်ဝန်ဒုမြို့တော်ဝန်မစ္စ Angela Aguilar Vargas ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ကြိုဆိုကြောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုစကားများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Civic စင်တာ၏တံခါးများသည်အကြမ်းမဖက်ဘဲဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးလာမည့်နှစ်တွင် Herediana အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးသို့ပိုမိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကပြောသည်။
ဖိုရမ်၏စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သည် အကြမ်းမဖက်ရေးလက်တင်အမေရိက၏မတ်လ Facebook၎င်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်တနေကုန်တီထွင်ခဲ့သည်၊ လက်တင်အမေရိကရှိမူလလူမျိုးများ၏ဘိုးဘွားတို့၏ပညာ၊ အကြောင်းအရာများတွင်ပါ ၀ င်မှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုအကြမ်းဖက်မှုကိုအကြမ်းမဖက်လုပ်ရပ်များအတွက်အဆိုပြုချက်များနှင့်စကားဝိုင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ လက်တင်အမေရိကတွင်လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုထောက်ခံသောလုပ်ရပ်များ။
အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်ဖိုရမ်၏နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကြမ်းမဖက်သောလူမှုအသိုက်အဝန်းများတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမျိုးဆက်သစ်များအားအကြမ်းမဖက်ခြင်းအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းဖြင့်ဖိုရမ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။
ဤ ၂ ရက်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ (မက္ကဆီကို၊ ကော်စတာရီကာ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူး၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ချီလီ) တို့သည်လက်တင်အမေရိက၏အကြမ်းမဖက်အနာဂတ်ဆီသို့ဤပထမနိုင်ငံတကာဖိုရမ်၌အဆိုပြုခဲ့သောအကြောင်းအရာ ၆ ချက်ကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဇယားတစ်ခုစီတွင်သူတို့၏ကွန်ယက်များကို ဆက်၍ ဆက်ကာချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပါ ၀ င်နိုင်စေရန်ဤဖိုရမ်၌စတင်ခဲ့သောအလုပ်များအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သောအမှတ်တရများ၊ နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျပေးထားပါသည်။ နှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုစီမံနိုင်သည်။
ဖိုရမ်အဆုံး၌အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကိုဇိမ်ခံပိတ်ပွဲတွင်သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ BoNila Band နှင့် Tariaca ရိုးရာအကအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။
Fernando Bonilla, Victor Esquivel နှင့် Guillermo Vargas (Staff) တို့သည်သူတို့၏တေးဂီတကောင်းများနှင့်တုန်ခါမှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမွေ့လျော်စေရုံသာမက Fernando သည်ဤမတ်လနှင့်ဖိုရမ်၏အဆိုပြုချက်များ၏မျက်နှာသာပေးမှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုပေးခဲ့သည်။
လူထုနှင့်လူမှုကွန်ယက်ကိုလိုက်ကြည့်သောသူများသည် BoNila ၏ရှိုးကိုအလွန်နှစ်သက်ခဲ့သည်။
အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားသည့်အခါ Tariaca ရိုးရာအုပ်စုရှိနေခြင်းသည် Costa Rican Caribbean မှထွက်ပေါ်လာသည်။ UNED Heredia ရှိ Civic Center for Peace အတွက် Civic Center ၌ပရိသတ်တစ် ဦး လုံးကိုကပြသောဤလူငယ်များ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အတူ၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်မှလူများစွာလိုက်ပါလာကြသည်။ ၏ Facebook စာမျက်နှာ အကြမ်းမဖက်မှုအတွက်လက်တင်အမေရိကန်မတ်လ.
06:10 မှာ 2021/23/14
အရမ်းကောင်းပါတယ် !! ဤမျှများပြားလှသောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်စီစဉ်သူများ၏ကြီးကျယ်သောလုပ်ဆောင်ချက် ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!